Wareysigeygii Jaalle Siyaad – SomaliaOne News Network
Oct 25, 2016 Hussein Nur QORMO 0 1693 Views By Hussein Nur
President of the Democratic Republic of Somalia, Major General Mohamed Siyad Barre
– 1986, Xilli la dhaafay 10:30 habeennimo ayuu Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah weriye khibrad leh, laakiin hadda Madax ka ah Wasaaradda Warfaafintu uu iigu yimid Xafiiska Wararka ee Radio Muqdisho. Waxaan akhrisanayaa wararka caalamka si aan uga xusho kuwa ay tahay in aan ummadda u sheego. Wuxuu i weydiiyay waxa aan caawa ka shaqeynayo. Waxaan u sheegay warka Saqda Dhexe in aan leeyahay iyo kan aroorta 06:30 diyaarintooda iyo akhrintoodaba.
Markiiba warka saqda dhexe ayaan ku duubay Studiyaha 4-aad oo shaqaaluhu uu ugu yeeri jiray Studio Four. Ka dibna waxaan diyaarsaday su’aalo dhowr ah. Waxay noqoneysaa markii iigu horreysay ee aan Madaxweyne wareysto.
Waan hor dhigay su’aalaheyga. Waxba kamuu reebin waxna kumuu darin ee wuu igu raacay. Gaari ayaan qaadannay oo ah Toyota Corolla. Yaasiin inta badan gaarigiisa isaga ayaa wadan jiray. Mararka qaarna isagaa nadiifin jiray. Wuxuu degganaa guryaha Xamar Bila. Habeenkii wuxuu gaariga dhigan jiray Saldhigga Booliiska Wardhiigleey oo gurigiisa aan sidaa uga sii fogeyn ka dibna wuu ka lugeyn jiray. Wasiirnimadiisa waxaa ka weynaa weriyennimadiisa. Isaguna marka horeba wuxuu ahaa nin ka dabeecad duwan xataa weriyeyaasha.
Yaasiin waa nin nolol jaban ku nool, baahidiisa maaddiga ah iyo danihiisa shakhsiga ahi ay aad u yar yihiin, damaacinnimo ka maran, aad u uruursan, akhris iyo dhegeysi badan isaga oo adeegsanaya Soomaali, Ingiriis iyo Carabi, dadka aan iska weyneysiin ee weliba la sheekeysta, si dhab ah ula sheekeysta oo u sheekeeya shaqaallaha oo dhan siiba kuwa ugu derejo hooseeya, saaxiibbo khaas ah aanan ku aqoon, ku dirqiya gurigiisa iyo xafiiskiisa meel kalena ay adag tahay in aad ku aragto.
Runtii waan yaabay in Wasiirku aniga miciin i bido, isaguna isku koobo in uu yahay nin aniga uun gaari igu wada.
Xataa inta aanuu Wasiir noqon Yaasiin wuxuu ahaa nin aad caan u ah, heybadna leh oo meel kasta oo uu tago laga xushmeeyo fadhigana looga kaco, inkasta oo meel uu tago oo aan shaqadiisa iyo gurigiisa ahayni ay iskaba yarayd.
Markii aan hadalka billaabay ayaa waxaa xowli waalli ah nagu dhaafay gaari Cabdi Bile ah oo dhanka airporka u xawaareynaya oo ay kor tuban yihiin Booliiska Dableyda ama ciidanka koofiyad casta ee u khaaska ah Madaxweynaha.
Waxay joojiyaha si xoog ah ugu qabteen bartanka wadada meel horteenna ku beegan oo qiyaastii boqol tallaabo in ka badan noo jirta. Inyar markii uu sii jiitamay asaga oo ay shaagaggiisu shanqar aan dhegaha u rooneyn sii deynayaan ayuu istaagay gaarigii. Markiiba dib ayay u soo qaadeen si haddana xawli ah.
Airporka ayaan gaarnay abbaaraha saqdii dhexe. Madax iyo ciidan isku dhafan ayaa is dhexmaraya. In yar ka dib Madaxweynaha ayaa soo degay. Somali Airlines ayuu ku socdaa. Wuxuu gacan qaaday Madaxda intoodii goobta timid. Isaga oo aan ku leexan qolka VIP ee uu wareysigu ka dhici lahaa ayuu baabuurkiisa raacay. Ma ogi in ay jirto cid ku wargelisay in weriye iyo Wasiirkiisii ay ku sugan yihiin Airporka si isaga loo wareysto.
Halkaas ayay mar qura wada dhaqaaqeen baabuur tiro badan oo u badan Landcruiser guux weyn oo ka badbadis ah iyo xowli ku dhaqaaqaya oo Madaxweynaha lagu gelbinayo. Waxaa dhex yaacaya koofiyad cas nin waliba qorigiisa hal gacan kor ugu hayo oo gaarigii uu la socday beegsanaya. Airporka oo aan ahayn hal waddo ee ah barxad weyn oo wada laami ah ayaa baabuurta midba meel ka soo dhaqaaqay ama ka sii dhaqaaqay. Nalalkooda ifitiinka aragga fog loogu tala galay ayaa u wada shidan oo marna ku indhaaha cawiraya marna qoryaha ciidanka iyo astaamaha lebbiskooda ka midka ah ee birta ka sameysan.
Waxaad moodda jahawareer iyo niman col galay. Dabcan waa hab ay u barteen oo waa ay og yihiin waxa ay sameynayaan. Goobtaas haddii aad taagan tahay waxa keliya oo aad ku mashquuleysaa waa in aad baabuurtaas ka badbaaddo iyo in aynaan isku dhicin askari qori sita buudna gashan.
Wasiirkayga dhererkiisa, lixaadkiisa iyo codkiisa marnaba kuma khaldamayo waxa goobta ka dhacaya. Waxaan arkay asaga oo igu soo cararaya oo hadalka ka soo billaabay meel iga fog oo marka hore aan maqli waayay, guuxa baabuurta iyo dabaysha badda ka soo dhacaysa awgood. Markuu soo dhowaaday ayaan fahmay.
Waxay noqotay in aan jahawareerkii aniguna dhex cararo aniga oo qalabka naagra oo igu culus garabka iigu jiro, luqunta ii suran tahay sameecadda dhegaha daboosha oo xarig ka laallaado, gacantana mikrofoon iyo xarko ku sita, baabuurta khatartooda iska ilaalinaya, haddana raadinaya mid aan aqoonsado oo i sii qaada.
Ma hubo, waxaanse u maleynayaa baabuur Land Cruiser ah oo Axmed Xasan Cawke oo Madaxweynaha la socday lagu soo doonay in aan raacay. Cawke wuxuu ahaa weriyaha khaaska ah ee Madaxweynaha, wuxuu xilkaas kala wareegay Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde markii uu noqday Wasiir ku Xigeen ka dibna Wasiirka Warfaafinta. Yaasiin wuxuu mar ka sii horreysay kala wareegay xilkaas, Cabdi Xaaji Gobdoon oo isagu noqday Agaasimaha Guud ee Warfaafinta, ka dibna Sportiga.
Anigu habeenkaas shil baabuur ayay ahayd halista aan ka baqayay, laakiin marxaladaha qaarkood marar kale i soo maray, wuxuu weriyuhu u shaqo tegeygaa goob khatarta aad ka baqeysaa ay tahay xabsi, afduub, rasaas, qarax iyo madfac oo sas iyo dhaawac fudud ka sokow aad ku naafowdo.
Axmed Cabdi Nuur, Axmed Xasan Cawke, Cabdi Xaaji Gobdoon, Land Cruiser, Maxamed Khaliif Giir, Maxamed Siyaad Barre, Somali Airlines, Villa Somalia, Xasan Cusmaan (Xasan-Biid), Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed (XHKS), Yaasiin Xaaji Ismaaciil Jirde
Clashes renewed in Galkayo: 'GIVE PEACE A CHANCE' Shil Madaxweyne